Xeeladaha Maldahan ee Xamar iyo Shirkii Jabuuti.
1.Tiro xad dhaaf ah oo ka kooban kuxigeenka ra’isal
wasaarihiisa, xukuumadiisa iyo xildhibaano ka tirsan
baarlamankiisa asal ahaana ka soo jeeda dalkan JSL.
Hadaba habkan waxa sida cadceeda ugu cad Farmaajo inuu xaqiray madaxbanaanida JSL markuu u dhigay,doodiina ku muujiyeen xildhibaanadiisa asal ahaan ka soo jeeda dalkan JSL inay gobol ahaan ku metalaan JSL,kana mid tahay Somaliyada uu xuurtada ku haysto. Hadii aanay sidaa ahayn Farmaajo casuumad ayuu u fidin lahaa dalkan JSL si ay ugu diraan ergo shirka ka qayb gasha.
Caddaynta labaad waxa weeye dhawrka aqoon yahan ee ka soo jeeday JSL waxa loo casuumay inay ka mid yihiin aqoon yahanada ka socda Somaliya,iyana mabay dareemin walow qaar kood ka tirsan yahiin xisbiga Waddani,xataa ismay waydiin maxaa looga dan lahaa casuumada shaqsinimo ee marti qaadka looga reebay dalkiina iyo xisbiyadiina.Markaa kuwan iyaga halkaa ayaan ku dhaafayaa,waxna odhan maayo mar hadaanay garanba danta iyo xeelada laga lahaa shirka ay ku bah dilmeen.
Somaliya,Somalida kenya,Somalida Itoobiya iyo Jabuuti,lagana dooday aayaha saamaynta uu guud ahaan Somalida ku yeelan karo isbedelka Abiy Axmed ka wado geeska.Mar haday Xamar maantana keentay xeelad ay xabaal ugu qodayso dalkan JSL saw maaha inaynu u quus goyno wada hadalada ceer yaanta ah ee reer galbeedku sidii dhallaanka innagu maaweeliyo.